Xeebta El Cañuelo, mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Costa del Sol | Wararka Safarka
Xeebta El Cañuelo
Luis Martinez | | Ekotourism, Xeebaha
Xeebta El Cañuelo waa, shaki la'aan, mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Costa del Sol. Waxay ku taal degmada Malaga ee Nerja, inkasta oo ay tahay aaggiisii ​​ugu dambeeyey ee bacaadka ah, ee durba xadka la leh deriska Gobolka Granada.
Laakiin muuqaalka xeebtaani waa jawiga dabiiciga ee cajiibka ah, ee ah buuraha Maro-Cerro Gordo. Muuqaalkaan cajiibka ah awgood, ma laha marinno sifiican loo yaqaan, inkasta oo aad ugu dhowaan karto baabuur ahaan. Tani waa tan si sax ah u siineysa mid kale oo ka mid ah soo jiidashadeeda weyn: ma aysan la kulmin ciriiriga meelaha kale ee bacaadka ah ee xeebta Malaga. Hadaad rabto inaad sifiican ubarato xeebta El Cañuelo, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Xeebta El Cañuelo, jawi dabiici ah oo mudnaan leh
2 Adeegyada xeebta El Cañuelo
3 Sida loo tago xeebta El Cañuelo
4 Maxaa lagu arkaa agagaaraha xeebta El Cañuelo?
4.1 Godka Nerja
4.2 Balakoonka Yurub
4.3 Hermitages iyo kaniisadaha
4.4 Dhismaha bulshada
4.5 Matxafka Taariikhda
Xeebta El Cañuelo, jawi dabiici ah oo mudnaan leh
Sidoo kale loo yaqaan cove el Cañuelo, xeebtan ayaa dhererkeedu dhan yahay saddex boqol iyo konton mitir oo keliya oo toban ballac ah. Sidaan kuu sheegnay, buuro waaweyn oo Maro ah ayaa ku wareegsan. Kuwani waa meelaha dhaadheer ee, meelaha qaarkood, gaadha laba boqol iyo konton mitir oo dherer ah oo ka kooban buuraha ugu dambeeya ee buuraha Alhama, Tejeda iyo Almijara.
Sidaa darteed, waxaad sidoo kale ka heli kartaa xeebo kale oo qurux badan aaggan. Iyaga ka mid ah, in ka mid ah Alberquillas-ka mawjad ka mid ah Cantarrijan, kan dambe ayaa loogu talagalay qaawanaanta. Haddii aad fursad u hesho, ku raaxayso meeshan buuqan ee badda. Raadinta waxaa loo oggol yahay masaafo laba boqol oo mitir u jirta xeebta aagga xeebta iyo konton qaybo kale ah.
Sidaa awgeed, badda waxaad ka heli doontaa buuro dhaadheer oo qurux badan waxaadna arki doontaa noocyada sida hiddo ama ariga buurta, oo ka soo degta buuraha la sheegay. Oo weliba waad arki doontaa majaajillo, falgons y gorgorrada lugta huruudda ah.
Xeebta El Cañuelo iyo buuraha Maro
Adeegyada xeebta El Cañuelo
In kasta oo ay ku jirto aag cidlo ah, aaggan bacaadka ah ayaa leh Dhamaan adeegyada waxaad ubaahantahay inaad ku raaxeysato maalin qurux badan xeebta. Waxay leedahay meel baabuurta la dhigto, in kasta oo ay ku taal buurta dusheeda. Maaddaama ay tahay aag la ilaaliyo, waa inaad xeebta ku lugeeysaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira adeeg bas oo kaa tagaya isla aaggaas bacaadka ah.
Waxay kaloo leedahay musqulo dadweyne iyo qubeysyo iyo qalabka badbaadada nafta. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku leedahay laba goobood oo jimicsi ah aagga aad ku buuxin karto baterigaaga ka dib markaad maydho.
Biyihiisu waa nadiif saafi ah waxayna kuu oggolaanayaan inaad ku tababarto quusitaanka quusitaanka. Badaheeda runti waa mid cajiib ah. Dhexdeeda, waxaad ku arki doontaa, tusaale ahaan, ah liin macaan, Nooc khatar ku jira. Haddii aad ku darto barar dhexdhexaad ah tan, qubayskaaga qafiskan ayaa noqon doona wax lagu farxo. Dhinaceeda, ciidda xeebta El Cañuelo waa cadaan in kasta oo ay waliba leedahay meelo quruurux ah.
Sida loo tago xeebta El Cañuelo
Sida kaliya ee lagu tagi karo xeebtaan waa waddo weyn. Si aad uga sameyso Nerja, waa inaad qaadataa N-340 jihada Almuñécar kadibna qaado bixitaanka 402. Dhinaca kale, haddii aad ku safarto wadada weyn ee cusub ee aada Almería, waa inaad ka baxdaa Kabo fardo ah kaagana qaado N-340, laakiin jihada Malaga.
Waxaad gaari doontaa dusha sare ee dhagaxa. Gaarigaaga ku dhaaf halkaas oo qaado baska inaad u degto xeebta. Qiimaheedu waa qiyaastii laba euro qofkiiba safarka wareega.
Maxaa lagu arkaa agagaaraha xeebta El Cañuelo?
Sidii aan hore u sharraxnay, bakhtigu wuxuu ku yaal saddex iyo toban kilomitir Nerja, mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Costa del Sol. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad uga faa'iideysato maalintaada xeebta inaad booqato.
Muuqaal kale oo ku saabsan xeebta El Cañuelo
Degsiimihii ugu horreeyay ee Nerja waxaa la taariikheeyay ku dhowaad afartan iyo laba kun oo sano ka hor. Xaqiiqdii, mid ka mid ah soojiidashada weyn waa rinjiyeynta godka godkeeda caanka ah. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa wax kasta oo aad ku arki karto magaaladan quruxda badan ee Malaga.
Ayaa laga helay Maro, si sax ah ugu dhow xeebta Cañuelo. Waa Hantida Danta Dhaqanka waxayna leedahay qolal dhowr ah oo leh stalactites iyo stalagmites cajiib ah. Dhexdeeda, intaa waxaa sii dheer, maacuun fara badan oo laga soo bilaabo xilligii Neolithic ayaa laga helay.
Laakiin, wax walba ka sarreeya, godku wuxuu u taagan yahay rinjiyeyn in aan kuu soo sheegnay. Xaqiiqdii, qaar matala shaabadaha ayaa noqon kara kan ugu da'da weyn ee ay abuurtay Aadanaha. Qolalka ay ka kooban tahay godka Nerja, waxaad ku booqan kartaa qaar ka mid ah magacyada soo jeedinaya sida Cataclysm, Waterfalls ama Ghosts.
Magacan waxaa loo bixiyaa a aragtida taasi waxay ku siineysaa aragtiyo gaar ah xeebta Malaga. Magaciisa waxaa soo jeediyay Boqor Alfonso XII, oo ay soo jiidatay muuqaalka intii lagu gudajiray booqashada Nerja sanadkii 1885. Laakiin xiise badan ayaa noqon doonta taalada loogu talagalay backgammon, kaluumeysigii hore ee taxanaha 'Verano azul', oo ka hooseeya aragtida.
Hermitages iyo kaniisadaha
Dhaxalka diimeed ee magaalada Malaga, ayaa kaniisadda badbaadiyaha, Dhisme Baroque iyo Mudejar ah laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad oo ay ku yaalliin sawirro derbi ah Francisco Hernandez. Isla waqtigaas ayaa iska leh kaniisadda yaabab, Maro, inkasta oo biilkiisu aad uga fudud yahay. Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato hermitage ee Las Angustias, sidoo kale Baroque iyo cupola oo lagu qurxiyay sawirro ka Iskuulka Granada ee Alonso Cano.
Balakoonka Yurub, oo ku yaal Nerja
Waxa kale oo xiiso leh inaad booqato Nerja the San Antonio Abad Sugar Mill, mid ka mid ah warshadihii ugu dambeeyay ee sonkorta lagu ilaaliyo xeebta Malaga. Iyo sidoo kale Biyo mareenka Aguila, oo leh afarteeda dabaq ee ku fidsan dooxada Coladilla.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa inaad aragto matxafkan, halkaas oo aad ka heli doonto qaybo badan oo ka mid ah Cueva de Nerja, laakiin sidoo kale macluumaad ku saabsan taariikhda dhow ka yimid magaalada Malaga. Waxay ku taal meel aad u yar oo ka fog Balcón de Europa.
Gabagabadii, Xeebta El Cañuelo Waa aag yar oo bacaad leh oo ku xareysan jawi dabiici ah oo cajiib ah. Si xad dhaaf ah looma booqan dalxiiska, maalin ka mid ah ayaa kuu oggolaan doonta adiga inaad ku raaxeysato badaha badda u gaarka ah iyo sidoo kale adeegyadeeda badan. Si aad u dhameystirto safarkaaga, waxaad booqan kartaa magaalada quruxda badan ee Nerja, oo leh godkeeda caanka ah. Miyaanay ahayn qorshe weyn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Ekotourism » Xeebta El Cañuelo
Iiddii Barxada Córdoba